Q मेरो हाछ्यू गर्दा, रुघा खोकी लाग्दा, गह्रौ वस्तुहरू उठाउँदा, व्यायाम गर्दा पिसाब चुहिन्छ । यसलाई के गर्दा ठीक हुन्छ वा निको हुन सक्छ ?
तपाईंले बताउनु भएको कुरा अनुसार तपाईंलाई चिकित्सा शब्दावलीमा तनाव असंयमितता भएको छ । यो कि पेल्भिक मांसपेशीमा कमजोरी वा नसासँग सम्बन्धित विकारको कारणले हुन सक्छ । उपचारको योजना बनाउनको लागि ठीक कारण पत्ता लगाउनु पर्दछ । शुरुवातमा तपाईंले निम्नलिखित परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ: तपाईंको आफ्नो तरल पदार्थ खाने बानी बन्द गर्नुहोस्, यदि तपाईंको धेरै तौलको पक्षमा हुनुहुन्छ भने, केहि तौल घटाउने प्रयास गर्नुहोस् । मादक पदार्थ र क्याफिन धेरै भएको पेयपदार्थबाट बच्नुहोस् । तपाईंको पेल्भिक मांसपेशिहरुलाई राम्रो बनाउनको लागि केगल व्यायामको अभ्यास गर्नुहोस् । यदि यी सबै कुराहरुले तपाईंलाई राम्रो भएन भने तपाईंको औषधिउपचारको लागि स्त्री-रोग विशेषज्ञसँग परामर्श लिनुहोस् । सबै कुराहरु असफल भएमा सर्जरीको नै आवश्यकता पर्दछ ।
Q तपाईंलाई यो कम्तिमा पनि छिटो गरिने शल्यक्रियाबाट कुनै रोग लाग्ने सम्भावना छ - मलाई लाग्छ सबै प्रयोग गरिने उपकरणहरु - सुई, चिरफारमा प्रयोग गरिने सानो चक्कु आदि सफा/ नयाँ हो - म चिन्तित हुनुपर्छ ? मेरो २ ओटा धेरै सानो कपाल प्रत्यारोपणहरू गरिएका थिए र दुबै शल्यक्रियाहरू पूर्णतया: सफा र धेरै आधुनिक थिए - म प्रयोग गरिएका उपकरणहरूको सर-सफाईमा मात्रै चिन्तित छु - के मैले चिन्ता गर्नुपर्छ ?
कपाल प्रत्यारोपणका लागि लगभग सबै स्तरीय संस्थाले कुनै पनि प्रकारको प्रक्रिया गर्दा सबै आवश्यक किटाणुरहित सावधानी अपनाउनु पर्दछ । यसैले तपाईंले चिन्ता गर्नुपर्दैन ।